Nzuko mmekorita nke mmekorita ya na LucidChart | Martech Zone
Nzuko mmekorita nke mmekorita ya na LucidChart
Kemgbe ọnwa ole na ole gara aga, a na m eji ya Hotgloo maka izipu waya. Anyị na-arụ ọrụ mmepe ọhụụ ma ugbu a, anyị chọrọ ihe eji emekọ ihe ọnụ. Emere m nyocha ụfọdụ n'ịntanetị maka visio uzo ozo wee chọta LucidChart.
Wezụga ihe ịrịba interface, ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na iPad na kwa jikọtara na ngwa GoogleAbụọ oké ọzọ atụmatụ maka m, onwe! Ọ bụrụ na ị jirila Visio (nke m hụrụ n'anya mana enweghị m ike ịnweta ikike), ị ga-ahụ LucidChart dị mfe iji. I nwekwara ike ibubata eserese Visio na mbipụta ndị ọkachamara ($ 9.95 kwa ọnwa!). Lee ọ nọ na omume na ụdị iPad:
Ngwa ahụ siri ike na m ga-eji ya maka ịmegharị waya. Enwere nkuzi ole na ole na channel LucidChart Youtube na iji ngwa ọrụ maka izipu waya na enwere m ike iji ya maka ọtụtụ ọrụ karịa ọnụahịa HotGloo na-enye ohere. Ha na-enyekwa ikike ịgbakwunye eserese nzukọ, mockups iPhone, UML Eserese, eserese ntanetị, map uche, map saịtị, Eserese Venn na ndị ọzọ
Jiri nke m Ntuziaka njikọ na i nwere ike nwalee niile nke adịchaghị atụmatụ nke LucidChart free maka otu ọnwa!
Anyị hụrụ gingde blọgụ… Ma…